काठमाडौं महानगरमा बालेनको अग्रता, के छ एमाले र काँग्रेसको अवस्था ? « Nipolnews
काठमाडौं महानगरमा बालेनको अग्रता, के छ एमाले र काँग्रेसको अवस्था ?
काठमाडौं, ३१ वैशाख-काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र तर्फका उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता बनाएका छन् ।
महानगरपालिकाका सहायक निर्वाचन अधिकृत प्रेमप्रसाद पौडेलले दिएको साढे ६ बजेसम्मको विवरण अनुसार बालेन शाह/स्वतन्त्र- ४०२, सिर्जना सिंह/कांग्रेस- २०२, केशव स्थापित/एमाले- ३१९ पाएका छन् ।
उपमेयर पदमा एमालेकी सुनिता डंगोलले ५२०मत पाउँदा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले ११० पाएका छन् ।